Ruambainzwi - Wikipedia
Ruambainzwi (ku Chingezi: phonology) kana unenainzwi ibazi reururimi inodzidza kuti mitauro kana matauriro anoronga sei manzwi avo (kana zvinoumba zvikamu zvezviratidzo, mumitauro yemasaini). Shoko racho rinorevawo manzwi kana kuti masaini emhando ipi neipi yemutauro. Pane imwe nguva, kudzidza kwephonology kwakabatana chete nekudzidza kwemaitiro emafoni mumitauro inotaurwa. Zvino zvinogona kuenderana ne:
(a) chero ongororo ye ururimi ingave padanho riri pasi peshoko (kusanganisira siribho (syllable), chitango (onset) uye rhaimu (rime), majesta (gestures) ekutaura, zvimiro zvekutaura, mora, nezvimwe wo), kana (b) zvikamu zvose zvemutauro apo ruzha kana zviratidzo zvakarongwa kuti zvibudise zvinoreva ururimi.
Mitauro yemasaini ine mataurirwo emutauro akaenzana nemanzwi emitauro inotaurwa. Mabhuroko ekuvaka ezviratidzo ndiwo mafambisirwo ekufamba, nzvimbo uye chimiro chemaoko.
3 Mamwe mapeji ekutarisa
Tarisai futi peji re unenashoko (teminorojia)
Izwi rekuti 'ruambainzwi' (kana kutora neno re Chingezi rekuti 'fonorojia' rinogona kuturikwa pamusoro pe 'sistimu re ruambainzwi' (ruzha kana sistimu ye chiratidzo) ye chero mutauro. Iyi ndiyo imwe yemaitiro akakosha ayo mutauro unofungidzirwa kuti unoumbwa, senge sindiksi (syntax) yawo, unenawumbwa (kana moforojia) yawo uye mashoko ayo.
Tarisai futi peji re unenaruvambo (etymology)
↑ Brentari, Diane; Fenlon, Jordan; Cormier, Kearsy (July 2018). "Sign Language Phonology". Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. doi:10.1093/acrefore/9780199384655.013.117. ISBN 9780199384655. S2CID 60752232.
↑ Stokoe, William C. (1978) . Sign Language Structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf. Department of Anthropology and Linguistics, University at Buffalo. Studies in linguistics, Occasional papers. 8 (2nd ed.). Silver Spring, MD: Linstok Press.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruambainzwi&oldid=92340"
Last edited on 10 Kurume 2022, at 08:31
This page was last edited on 10 Kurume 2022, at 08:31.